RaspiReader, onye na-agụ mkpịsị aka na-eji Raspberry Pi 3 | Akụrụngwa n'efu
Mgbe ngosipụta na ọgbọ na-abịa abịa smartphones na mobiles, enwere ọtụtụ ndị na-achọ itinye akara mkpisiaka na ọrụ ha ma ọ bụ ngwaọrụ ha. Nke a bara ezigbo uru maka ọrụ ma ọ bụ ojiji dị mkpa maka nchekwa dị elu. Ọ bụ ya mere onye rụrụ ya Joshua J. Engelsma kpebiri iji akụrụngwa n'efu enwere na-eme ka ọ dịkwuo mma ma na-eme ka ndị na-agụ akara mkpịsị aka.
Ya mere, Jọshụa na-anwa ịmepụta onye na-agụ akara mkpịsị aka nke bụ ihe akaebe megide ihe adịgboroja na nchọpụta ụgha, kamakwa na ndị ọrụ nwere ike ịmepụta onye na-agụ akara mkpịsị aka na-enweghị ihe ọ bụla maka ọrụ ngwanrọ n'efu.
Nke a bụ otú Ọrụ RaspiReader, oru ngo nke na - ekeputa ihe akara aka zuru oke ma nwee nchedo ya na otutu eserese, iko, ọkụ LED na Raspberry Pi 3.
A na-eji nke ikpeazụ eme ihe ọ bụghị naanị iji chekwaa mkpịsị aka aka kamakwa hazie akara mkpịsị aka ha nwere ike iji wee nwee ike ịmata ma ọ bụrụ akara mkpịsị aka mbụ ma ọ bụ naanị adịgboroja. Ya mere, mgbe Raspberry Pi na-enweta ihe oyiyi nke mkpịsị aka, usoro ihe omume ahụ na-achọ njehie ma ọ bụ folds nwere ike ịdị na mbiet ahụ na-egosi na ọ bụ adịgboroja.
Joshua J. Engelsma ejirila ọrụ RaspiReader mee ihe ọrụ gị na Mahadum Michigan ma dabara nke ọma ọrụ ahụ bụ n'ihu ọha dị, n'ihi ya, anyị nwere ike ịmepụta akara mkpisiaka dị ka RaspiReader, ọ bụghị naanị n'ihe gbasara Akụrụngwa kamakwa na Software, ebe ọ bụ ebe nchekwa github anyị nwere ike ịchọta ọbá akwụkwọ na mmemme niile edere na eke nke na-agbanwe usoro RaspiReader niile.
Ihe kacha adọrọ mmasị banyere ọrụ a bụ na RaspiReader dakọtara na mmemme ndị ọzọ Ihe Akụrụngwa Ndị Ọzọ, nke ahụ bụ, anyị nwere ike iji ya dị ka ihe nche iji mepee ọnụ ụzọ, imeghe ụzọ ndị dị ka ịntanetị ma ọ bụ naanị ịmalite ụgbọ ọ bụla anyị na-ewu. Ma gị Na-anwa anwa wuo RaspiReader gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » RaspiReader, onye na-agụ mkpịsị aka na-eji Raspberry Pi 3